Panettone - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Efa fantatrao fa ny obsession-ko mandritra ireo daty ireo dia ny roscon de reyes fa tamin'ity taona ity dia te hanandrana an'ity aho vatomamy mahazatra avy amin'ny firenena mifanolo-bodirindrina amintsika: Italia. Amin'ny ankapobeny dia mahazatra an'i Milan izany, na dia efa saika nataontsika aza izany, satria hita any amin'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana.
Nanapa-kevitra ny hanandrana ny fomba fahandro avy amin'ny boky "Expectacular miaraka amin'ny Thermomix®" aho ary tena tsara izany. Na dia milaza aza ny recipe fa misy 3 panettones eo ho eo, manoro hevitra anao aho mba hanao amin'io vola io ihany Panettones 2 mba hivoaka bebe kokoa eo ambonin'ny lasitra izay, raha ny fahitako azy, dia mahatonga azy ho tsara tarehy kokoa.
ny lasitra Azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny fivarotana confectionery manokana na amin'ny Internet.
Ny panettone dia mofo vita amin'ny koba karazana brioche, miaraka amin'ny voaloboka sy voankazo mamy. Na dia afaka mahita izany miaraka amin'ny sôkôla koa aza isika. Nomaniko tamin'ny dikan-teny roa izany. Raha tokony hampiditra ny voanjo amin'ny dingana farany amin'ny koba ao amin'ny Thermomix® aho, dia nanapa-kevitra ny hanala ny koba aho, mizara roa ary manampy ny voanjo amin'ny iray ary ny sôkôla amin'ny iray hafa, mametafeta azy tsara mba ho tsara. tafiditra ao anatin'ny faobe.
Tiako manokana ilay miaraka voanjo. Nasiako kennuts voatoto, voaloboka maina ary apricot maina. Na izany aza, miaraka amin'ny ankizy, ny iray izay mandresy indrindra dia ny sôkôla.
Mofomamy misy masirasira izy io ary tsy maintsy hajainao ny fisondrotry ny koba. Toy ny ao amin'ny roscon de reyes Manoro hevitra anao betsaka aho faharetana ary manao izany tsy maimaika ianao satria mila ny fotoanany ny vahoaka fa tsy mitovy foana. Miankina be dia be amin'ny mari-pana ao an-dakozia ary na dia ny akora.
Manentana anao hanandrana azy ireo satria mivoaka izy ireo tsara, azo antoka fa ho faly amin'ity recipe ity ny fianakavianao.
Fomba fahandro italiana mahazatra hankalazana ny Noely.
Fotoana fiomanana: 2h 10M
Fotoana hiketrehana: 8M
Fotoana manontolo: 2h 18M
Ho an'ny sourdough:
20 g ny masirasira voatoto
Siramamy 1 sotrokely
130 g ny koban'ny tanjaka
300 g ny voankazo isan-karazany (voaloboka maina, voankazo misy voasarimakirana voatoto, kennel sns)
50 g ny rhum na cognac ho marinate
Ho an'ny lamesa:
Ny hoditry ny voasary na voasarimakirana iray (nasiako antsasaky sy sasany)
X tantely tantely
30 g ny masirasira voatoto
Rano voninkazo voasary 40 g
450 g ny koban'ny tanjaka
Dibera 100 g amin'ny hafanan'ny efitrano
Apetrakay ao anaty vera sy programa ny akora rehetra amin'ny sourdough 15 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Esory avy ao anaty vera, manaova baolina ary apetraho ao anaty vilia lehibe misy rano mafana.
Rehefa mitsingevana sy mitombo avo roa heny ny haben'ny dumpling dia vita izany.
Mandritra izany fotoana izany, manapaka ny voanjo, voaloboka ary voankazo voamaina ao anaty vera izahay, 2 segondra, hafainganam-pandeha 5 ary avelanay arotsaka ao anaty vilia misy ny brandy izy ireo.
Napetrakay tao anaty vera ny siramamy sy ny voasarimakirana. Mitifitra izahay 30 segondra, hafainganam-pandeha 5-10.
Ampio ny sourdough sy ny sisa tavela, afa-tsy ny dibera, araka ny filaharana voatondro sy ny programa 3 minitra, kaopy mihidy, hafainganam-pandeha.
Avy eo reprograma isika 2 minitra, kaopy mihidy, hafainganam-pandeha ary manondraka ireo cubes dibera amin'ny vava isika.
Avelantsika hijanona ao anaty vera ny koba miaraka amin'ny beaker ary rakotra harona plastika mafana mandra-pahatongany avo roa heny ny habeny.
Miankina amin'ny hafanan'ny fijanonana dia mety miovaova eo anelanelan'ny 30 minitra ka hatramin'ny 1 ora.
Sakanay ireo voankazo izay makeray ao anaty harona, mba tsy hisy ranon-javatra ho an'ny masaka farany.
Rehefa nitombo avo roa heny ny koba dia nandamina fandaharana indray izahay 1 minitra, kaopy mihidy, hafainganam-pandeha ary arotsaho ao am-bava ireo voankazo maina maina.
Esory ny koba eo amin'ny latabatra fiasana miaraka amin'ny lafarinina ary, miaraka amin'ny tanana manitra, dia mametafeta kely amin'ny tanana izahay, mba hahazoana antoka fa mizara tsara ny voankazo.
Zarainay roa ny koba ary apetraka ao anaty lasitra miendrika baolina.
Hosodoko amin'ny atody nokapohina izy ireo ary manao tapa-kazo miendrika hazo fijaliana.
Avelantsika hiala sasatra amin'ny toerana mafana tsy misy drafts izy ireo mandra-pahatongan'izy ireo avo roa heny. Tokony ho 60 ka hatramin'ny 90 minitra.
Hafanaina hatramin'ny 180º ny lafaoro amin'ny hafanana ambony sy ambany.
Rehefa nitombo avo roa heny ny haavony, dia apetrakay ao anaty lafaoro mandritra ny 40 minitra eo ho eo.
Raha hita fa mivolontsôkôlà be loatra ny eny ambonin’ny tany dia rakofana amin’ny foil aluminium na lafaoro izy ireo mba ho tsara ao anatiny sy tsy handoro ny tany.
Rehefa maka azy ireo avy ao amin'ny lafaoro, dia manindrona ny fototry ny panettones amin'ny skewer na tsorakazo amin'ny 2 cm. Isika dia manohana ny faran'ny fanjaitra eo anelanelan'ny faritra roa ka ny panettone dia mihantona ambony.
Avelantsika mangatsiaka izy ireo amin'io toerana io.
Fanazavana fanampiny - Roscon de Reyes
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Mihoatra ny 1 ora sy 1/2, Arina sy mofo, Navidad, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Arina sy mofo » panettone
Tao an-trano dia nivory ny fianakaviana iray manontolo tamin'ny 25. (Tokony ho 30); ary toy ny mahazatra dia mihinana mandra-pahatongan'ny fahavakisanay, fa ny Pannettone tsy mety ho eo mihitsy. Misaotra Silvia; mazava ho azy fa hiezaka hanao izany aho; Holazaiko aminao ny fomba.
Raha ny fanazavana, aiza ny pejy nividiananao lasitra ...?
Jeles dia hoy izy:
Efa fantatrao ve ny pejin'ireo lasitra?
apetraho amin'ny fi k tiako hatao izany misaotra oroka anao
Mamaly amin'ny jeles
Joaquín, novidiako ireo lasitra tamin'ny tranokala fametahana. Ny habeny dia antonony. Manantena aho fa mahafinaritra anao izy ireo. Lazao aminay.
Maite dia hoy izy:
Nividy ny bobongolo tao amin'ny fivarotana fandraisam-bahiny manokana any Collado Villalba de Madrid, ao amin'ny polygon P-29.
Mamaly an'i Maite
Tsara tokoa, Silvia!. Raha mijery ireo sary dia efa ampirisihina aho haka azy ireo amin'ity taona ity. Nahavariana izy ireo. Oroka.
Tena tsara izy ireo, hivoaka tsara !!
Silvia dia hoy izy:
Aiza no ahazoako ny lasitra? Satria lehibe kokoa noho ny mahazatra izy ireo
Mamaly an'i silvia
Nahazo azy ireo tamin'ny tranonkala ny fametahana. Novidiko ny habe antonony.
Mahagaga, inona ny sary! Toa mahatalanjona izany. Miarahaba anao mpampianatra!
Misaotra tsara tarehy, na dia tsy dia mamy loatra aza ianao dia mila manandrana an'ity. Mivoaka manankarena be izy io, tsy maintsy gaga ny fianakavianao amin'izany ianao amin'izao fotoana izao.
Eny, te-hanao izany aho, fa tsy fantatro hoe aiza no hividianana lasitra, azonao atao ve ny mametraka ny pejy izay nividiananao azy? Misaotra anao tsara ary manohy toy izao, matihanina ianao, oroka
Nividy an-tserasera azy ireo tao amin'ny trano fanaova-mofo aho, saingy efa nilaza tamiko izy ireo fa azo vidiana ao amin'ny minguez ara-barotra koa izy ireo.
Misaotra tsara amin'ny fanampianao, manaova zavatra matsiro hatrany, ampifandraisinao aho hahahaha, oroka
sandra mc dia hoy izy:
Salama Silvia, tsara fa manomboka amin'ny hevitra ho an'ny Krismasy ianao… niandry azy ireo aho. Tsara ny sary, miaraka amin'ny faniriana hiampita ny lamba lamba ary hihinana azy ... Panettone dia mipoitra foana ao an-tranoko amin'izao fotoana izao, noho izany dia tsara ny manao izany amiko, saingy mazava ho azy, tsy dia manana avo loatra aho bobongolo, hiezaka aho hitady azy, fa amin'ny tranga tsy hitako ... heveriko fa tsy mety amin'ny lasitra hafa koa io, sa tsy izany? na fanafody antrano. Oroka sy misaotra anao nanome anay kely ny votoatin'ny Krismasy.
Mamaly an'i sandra mc
Sandra Faly aho fa tianao ianao fa efa manomboka amin'ny hevitra momba ny menus Noely isika, saingy amin'izao fotoana izao dia zara raha manam-potoana isika ary tsara kokoa ny mandrindra tsikelikely ny resantsika.
Ny lasitra ho an'ny panettone dia vita amin'ny taratasy fanary ary novidiko tao amin'ny fivarotam-bokatra an-tserasera izany.
Ny safidy iray dia ny fandefasana ny ao anaty fitoeran-drano lava toy ny charlotte na ny moffle bobongolo amin'ny taratasy greaseproof.
Na dia manana fahaizana sy fotoana aza ianao dia azonao atao ihany koa ny manamboatra lasitra panettone ao an-trano, manamafy ny baoritra amin'ny baoritra ary mampiasa kasety adhesive mety amin'ny fanaova.
Salama Silvia, misaotra amin'ny hevitrao. Mieritreritra aho fa tsy maintsy manararaotra an'io satria tsy azoko ny lasitra… na amin'ny Fitsarana Anglisy izay hiafarako foana any rehefa sarotra amiko ny mahita zavatra. Toa tsy sarotra ny lazainao amiko momba ny fametahana lasitra avo ary hanandrana aho, eny ... manomboka izao hanao fanazaran-tena ary hijery tsara amin'izany andro izany. he he
Oroka iray ary manantena ny hahita ny fomba fahandro manaraka anao ………
Olala dia hoy izy:
Salama Silvia, tsy haiko na "block" na inona no tsy mety amiko ... fa tsy azoko ny tapany farany, rehefa miteny ianao hoe "avelao mihantona ambony ambany", azafady mba hazavainao?
Raha ny tokony ho izy, na dia tsy dia lafo loatra aza ny tenako, dia andevozin'ny tranonkalanao aho, mahatalanjona tokoa ianao! Miarahaba anao!
Valio i Olalla
Loli Coast dia hoy izy:
Salama, tiako ity fomba fahandro ity, saingy manana fanontaniana aho, azoko atao ve ny manolo ny rano voninkazo volomboasary amin'ny votoatiny hafa sa tsy hametraka azy ??? Aiza no ahitako azy? MISAOTRA
Valiny tamin'i Loli Costa
Loli, hiezaka ny tsy hisolo azy aho toy ny ao amin'ny roscón de reyes satria manome azy manokana. Amidy amin'ny fivarotana lehibe na fivarotam-panafody izy ireo, saingy lazao azy ireo fa natao hampiasa sakafo izany.
Maria to dia hoy izy:
Fifaliana re izany! Tena te hahazo an'io fomba fahandro io aho. Amin'ity herinandro ity dia hanana fotoana kely aho hanandramako azy. Misaotra anao.
Mamaly an'i maria a
Lazao aminay ny fomba mety aminao. Tao an-tranoko dia nahomby tokoa.
Nuria-52 dia hoy izy:
Fa tsara izany, hanao an'ity recette ity aho, satria tiako ny "panettone", ary izao dia tsy ho diso aho, satria matsiro ... manantena aho fa ho tsara ho ahy izany.
Silvia, na dia tsy manoratra betsaka aza aho dia manaraka anao foana aho satria toerana anazavanao zavatra marobe amiko… tiako io… .. TANDREMO IZAO… Misaotra anao sy Kisses
Valiny tamin'i Nuria-52
Eo ... azafady fa te hanontany anao aho hoe ahoana no ahafahako misintona ny fomba fahandro amin'ny PDF, satria mieritreritra aho fa hisintona ny sasany toa izao ...
Nuria, eo ambanin'ny lohatenin'ny recipe tsirairay, eo anoloan'ny sary dia misy bokotra eo ankavia misy soratra hoe "print recipe", tsindrio eo ary azonao atao ny manonta azy.
lapa lola dia hoy izy:
lafatra ny recette !!! Vao avy nividy lasitra sy lafarinina ary masirasira tao anaty mofo aho… Zavatra iray ihany no ilaiko, toy ny olalla tsy azoko ny dingana farany… azonao hazavaina indray ve? Mieritreritra an'izany aho, saingy tsy azoko ny momba ny tsorakazo, ny siny fitehirizana… misaotra !!!!!!!!!!
ny dingana voalohany (sourdough), mihoatra ny kely, firy ny faharetan'ny koba nitombo avo roa heny ???
ohatrinona ny fanontaniana !!!!!
Manantena ny bobongolo aho hanao izany.
famihinana sy arahaba arahaba anao, tiako io!
Mamaly an'i lola palacios
Misy pejy maromaro ahafahanao mahazo ny lasitra. Ao amin'ny »El amasadero.com» dia manana azy ireo amin'ny habe samihafa izy ireo.
Omaly aho no nanao izany manaraka ny dianao, fa toa roscón de reyes fa tsy panettone; tsy i ostante no lefitra, tsy nanome fotoana ahy na haka sary mampalahelo azy.
miala tsiny Miala tsiny.
Tsy ampy izany
Gloria dia hoy izy:
Salama, niantso ahy i Gloria, mahazo mailaka momba ny resipeo rehetra aho, feno fankasitrahana aho amin'izany, ary amin'izao fotoana izao dia liana amin'ny panettone aho, azonao atao ve ny milaza amiko rehefa miresaka momba ny masirasira ianao dia ny manamboatra an'io fangaro io aloha dia avy eo aho apetaho miaraka amin'ireo akora hafa, fa noho ny vaovao, Glory.
Valiny tamin'i Gloria
Mayra Fernandez Joglar dia hoy izy:
marina ny anao!!. Ny sourdough dia karazana "pre-dough" izay atao ary avy eo ampidirina ho toy ny singa hafa. Tena tsotra ny manao izany, tsy maintsy manaraka ny toromarika fotsiny ianao.
Manantena izahay fa ho sahy hanao izany ianareo!
Valiny tamin'i Mayra Fernández Joglar
Marta dia hoy izy:
Tena tsara be ilay izy !! Manantena ny hanao azy aho, efa nividy lasitra tao anaty koba aho saingy manana fisalasalana kely, te-hanao azy amin'ny sôkôla sôkôla fa tsy apetrakao ny vola, apetraho fotsiny ny voanjo, mitovy ve izany ? Misy macerated ihany koa ao anaty roma? Misaotra betsaka anao nanazava izany.
Miarahaba ary manohy mamoaka recette, manampy betsaka anay ho an'ireo izay manomboka ...
Mamaly an'i Marta
Salama, bobongolo inona no nampiasanao ???? Manana safidy maromaro aho ary tsy fantatro izay taratasy hovidiana. MISAOTRA
Ascen Jimenez dia hoy izy:
Ny bobongolo ampiasaina amin'ity recette ity dia 13 santimetatra ny savaivony amin'ny fotony ary 10 santimetatra ny haavony.
Valiny tamin'i Ascen Jiménez
Jesus Ramiro dia hoy izy:
Somary matroka aho fa tsy sahy nametraka voankazo firy taminy, ary tsy nampiasa bobongolo pannettone, saingy naniry ny hanandrana nandritra ny taona maro aho mba hamela ny biraona izay ananako amin'ireo indostrialy ary tiako izany.
Mamaly an'i Jesús Ramiro
Endrey, tsara, Jesosy! Ho hitanao, ny manaraka izay hataonao peta-kofehy 😉
Misaotra nilaza taminay.
Esther dia hoy izy:
Salama tolakandro, amidy ao amin'ny «La Boutique de las Tartas» ao Don Benito (Badajoz) ny lasitra… Nividy azy aho androany maraina ary hanao ny andrana voalohany aho rehefa manana huekiiinnnn voalohany… .hehehe
Miarahaba «La Petite Blanche» 😉
Valiny tamin'i Estera
Salama daholo. Ny lasitra dia azo vidiana ao amin'ny El Horno de Babette (Madrid). Tsy tadidiko ny lalana marina fa misy tranokala izy io ary afaka jerenao eto.
Valiny tamin'i Monica
Nataoko ny fomba fanamboaranao panettone ary ny marina dia rehefa nataoko izany dia gaga aho tamin'ny habetsaky ny masirasira izay nangatahan'ny recette, raha atotaly, 50 grama. Ny vokany dia bun, izay tsy mitovy velively amin'ny panettone, ny koba tsy dia mitovy amin'ny roscón de Reyes ary eo amboniny mangidy, noho ny masirasira be loatra. Mahamenatra ny ora sy ny vola very tamiko ity fomba fahandro ity.
Miala tsiny aho fa nanjo anao izany. Ary tena marina ny anao, masirasira loatra. Napetrako tamin'ny rohy hafa ny rohy: http://www.thermorecetas.com/panettone-2/
Ity recette napetrako ity dia mitaky fotoana lava vao hitsangana nefa manankarena be (izaho no nosedraina ary hita ao amin'ny boky Thermomix italianina).
Salama, efa novakiako ny hevitra rehetra ary hitako fa tsy misy valiny momba ilay hoe "avela hangatsiaka ambony ambany". Afaka manampy ahy amin'izany ve ianao? Misaotra
Misy ny mpahandro mofomamy izay mamadika azy io ary ny hafa tsy ... Ny zavatra sarotra amin'ny famadihana azy io ao an-trano dia ny fahitana ny fomba. Azonao atao ny manindrona azy amin'ny fanjaitra lava ary manohana ny tendrony amin'ny sehatra avo roa.
Na izany aza, raha avela hangatsiaka ianao nefa tsy ahodina, dia tsara ihany koa.
Mofomamy sôkôla tiorka